Mufananidzo anotorwa muVietnam nebhatiri reMacBook Pro yake | Ndinobva mac
Mufananidzo anotorwa muVietnam nebhatiri reMacBook Pro yake
Ignacio Sala | | MacBook Pro, Mac makomputa
Mavhiki mashoma apfuura, takakuzivisa nezve iyo nyowani bhatiri yekutsiva chirongwa chakagadzirwa naApple, chirongwa chaibvumidza vashandisi veimwe modhi, chinja mabhatiri ako nekuda kwenjodzi yemoto kana kuputika. Ndege dzinokurumidza kugadzirisa runyorwa rwezvigadzirwa izvo zvisingakwanise kubhururuka kuisa MacBook Pro.
Izvi zvakakonzera akateedzana ezvinetso kune vese vashandisi avo panguva yekuzivisa uye nemazuva akatevera vaifamba neMacBook Pro yakakanganiswa, kubvira havana kukwanisa kudzoka vachishandisa ndege. Kana iwe uri munyika imwe chete, hapana dambudziko rakakura, nekuti dambudziko rinogadziriswa nechitima kana nemotokari. Asi kana iwe ukazviwana uri munyika iri zviuru zvemamaira kure ... zvinhu zvinobva zvaoma.
Chirungu Kufamba Mufotori parizvino yakabatwa muVietnam Nekuti yako 15-inch MacBook Pro iri pane runyorwa rwezvigadzirwa izvo zvisingakwanise kufamba nendege nekuda kwenjodzi yemoto kana kuputika kwebhatiri. Hapana ndege inobvumidza iwe kupinda mundege, nekudaro kunze kwekunge watsiva bhatiri uchafanirwa kugara munyika nekusingaperi.
Kekutanga paakaronga kutora nendege kudzokera kuUK, akagamuchira yambiro yekumukurudzira kuti asabatidza mudziyo panguva yendege, asi achangokwira ndege, akarambidzwa kufamba nayo. Vakataura kuti kana achida kubhururuka, siya mudziyo munyika, chimwe chinhu icho zvine musoro chaasina kuita sezvo chiri chimwe chezvishandiso zvake zvebasa.
Ari parizvino kumirira kutsiva bhatiri rinosvika kubva kuSingapore, bhatiri rinogona kutora kusvika kumavhiki maviri kuti risvike. Iyo MacBook Pro modhi yakakanganiswa neiyi kurambidzwa yaive iri kutengeswa kubva kutanga kwa2 kusvika pakati pa2015.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Mufananidzo anotorwa muVietnam nebhatiri reMacBook Pro yake
Marco Antonio Aguilar Torres akadaro
Uye zvaive zvisiri nyore kwaari kubvisa bhatiri uye kufamba? uye paunosvika munyika yako uchachinja bhatiri ???
Pindura Marco Antonio Aguilar Torres
Podcast 11 × 06: Dzokorora kune cascoporro
Vashandisi veApple Watch muJapan vane dambudziko nyowani reChiitiko